AUTOTRADE GOLD - ATG - Irobhothi Lokuhweba Ngegolide - XAU/USD
I-Crypto Investment ▼
I-XAU / USD
Igolide Robot Yokuhweba
AutoTrade Gold 5.0 kuyinto ukuhweba irobhothi Okuzenzakalelayo kwe-Indonesian okusekelwe emakethe yegolide. Futhi iteketiswa nge-ATG, Goldi-oracle, Self Gold noma EA Robot Gold ngabasebenzisi bayo, ihlose ukuthola inzuzo yansuku zonke ephakathi kuka-0,5 no-1,5% wemali yakho enkulu. Awukwazi ukulahlekelwa ngaphezu kuka-3% ngosuku. Leli robhothi lihweba ngemodi ye-scalping futhi livula indawo eyodwa kuphela ngesikhathi. Ivikeleke ngokuphelele, uma i-ATG 5 irekhoda ukulahlekelwa, izozama ukubuyisela izinzuzo zayo phakathi nosuku ngokuhweba kwesibili. Futhi thola I-AutoTrade Crypto, irobhothi elisha lokuhweba elenza ukuzuza kwezinsuku eziyi-7/7 ku-Bitcoin.
Bhalisa ku AutoTrade Gold Okokufundisa okubuyekeziwe
📀 EA ATG 5 iyatholakala ukuze ilandwe nhlobo broker.
Intengo yelayisense 1 kwa-Auto Trade Gold
Ukutshalwa kwemali okuncane
Utshalomali olunconyiwe lulonke
Inzuzo elindelwe yanyanga zonke
Izinzuzo zerobhothi AutoTrade Gold
Phatha futhi ulawule izimali zakho e- broker I-LegoMarket LCC usebenzisa uhlelo lokusebenza MetaTrader 4 ou ne broker ozikhethele ngokuthenga nokulanda irobhothi kuwebhusayithi yePansaka (isinyathelo sesi-2 sesifundo esingezansi). Nguwe kuphela ongafinyelela kutshalomali lwakho: Isikhwama sokuqala + imali etholwayo + inzalo ehlanganisiwe.
Ayikho isofthiwe engafakwa. Awekho amakhono okuhweba adingekayo.
Isixazululo sokuhweba esakhiwe ngu Pansaka, egxile emakethe yegolide.
Ukusebenza kahle ± 15%
Isilinganiso semali engenayo engu-15% ekubuyiseni kwanyanga zonke.
Okuhlangenwe nakho okunamandla
Ngaphezu kweminyaka engu-2 esimweni sangempela semakethe.
Qala isipiliyoni ngemali encane eyi- $ 250.
Imiphumela esobala kuhlelo lwakho lokusebenza MetaTrader 4.
15% amaholo / ngenyanga nge AutoTrade Gold
nge-Auto Trade Gold 5.0
🚧 Qaphela, ayisekho ividiyo esebenzayo ku-YouTube inqobo nje uma ukugcinwa kwesayithi kusesimweni Pantheratrade isekhona. Isifundo esibhalwe ngezansi sizobuyekezwa njalo.
Iba ne-akhawunti ye-Crypto
I-Platform ekuvumela ukuthi uthenge futhi udayise i-cryptocurrencies yakho kodwa futhi ukondle irobhothi lakho kanye ne broker I-LegoMarket.
Bhalisa ku PantheraTrade
Inkundla ye-API exhumanisa i-ATG ne broker I-LegoMarket.
Thenga ilayisense yakho ePansaka
Inkundla yokuxhumana evumela ukuthengwa kwelayisensi yakho yokuphila konke.
Igalari yezithombe Autotrade Gold ku-Instagram
Ukubalwa kwezinzuzo ze-ATG 5.0 ngaphandle kokufaka inzalo eyinkimbinkimbi
Ithebula elingezansi kufanele lithathwe njengesibonelo futhi kungenzeka lingakhombisi iqiniso langempela. Kukhombisa ukuvela kwenhlokodolobha yakho ngokwesamba esifakiwe, ngokuya nge ukwanda okwenyukayo kuka-15% ngenyanga. Inzalo ehlanganisiwe yansuku zonke ayizange inakwe kulesi sibalo. Uma uhoxisa umholo wakho nyanga zonke, kuzokuthatha cishe izinyanga ezingu-6 ukubuyisela imali oyitshalile uma uqhathanisa nezinyanga ezi-4 uma ungakhiphi lutho.
+ Abatshalizimali abangu-300.000 Imiphumela ye-TGA 5
+ ilayisense 2 ($ 224)
+ ilayisense 3 ($ 560)
⚠️ Izikhumbuzo ezibalulekile nezeluleko zanoma yimuphi umtshali-zimali
Khumbula ukuthi lolu wutshalomali oluyingozi, ukuthi utshala imali ongadingi ukuba uphile nokuthi umgomo wakho oyinhloko uwukubuyisela imali yakho yokuqala ngokushesha ngangokunokwenzeka ngokohlelo lwakho lokutshala.
Isu isibonelo : Ngitshala i-$ 10.000 kuyo AutoTrade Gold. Ngaphandle kokuhoxa futhi ezinyangeni ezi-5, kufanele ngiphinde kabili imali yami. Lapho nje ngifinyelela isamba esingu-$22.000, ngiqala ukukhipha u-$2000 isikhathi ngasinye lapho irobhothi liwakhiqiza phakathi namasonto ambalwa. Ngakho ngikhipha ama-$22.000 kuya ku-$20.000 isikhathi ngasinye lapho ngifinyelela kuwo. Ngakho-ke ngithola imali yami yokuqala esikhathini esingaphansi kwezinyanga eziyisi-9 futhi ngingenisa imali engenayo engu-$3000 njalo ngenyanga (20.000 x 15%) ngenxa Autotrade Gold.
5 amalayisense atholakalayo ngokuya ngamandla akho okuhweba
Amalayisense angathuthukiswa, okusho ukuthi uzokhokha kuphela umehluko phakathi kwelayisensi yamanje kanye nelayisensi oyifunayo. Irobhothi alihwebi ngaphansi kwemali engu-$100. Uma uhoxisa futhi weqa umkhawulo ongu-$50 ku-akhawunti yakho yokuhweba, uzolahlekelwa ilayisense lakho.
Ngokwesibonelo : Ilayisense yesi-2 ikhawulelwe ku-$5000 (imali ebekiwe + umholo wansuku zonke). Lokhu kusho ukuthi ngaleli layisensi, uma usufake imali yakho enkulu, isibonelo u-$3000 futhi wenza u-$2000 emalini etholwayo, uzobe usufinyelele isilinganiso esiphezulu esigunyaziwe esingu-$5000. Ukusuka lapho, irobhothi lakho lizoyeka ukuhweba. Ngakho-ke kuzodingeka ubuyisele ingxenye yemali oyitholayo noma uthathe ilayisensi ephezulu. Khumbula ukuthuthukisa ngaphambi kokuthi irobhothi lakho lime, ngaphandle kwalokho kuzodingeka ukuthi uthinte abosizo lwezobuchwepheshe noma uqale kabusha mathupha ukuxhumeka kwerobhothi kusayithi. Uhlelo lwe-ATG. Inkinobho ihlinzekwe ngale njongo.
ngesamba semali phakathi kwe-100 kanye 500 $.
Thenga ilayisense 1
ngesamba semali phakathi kwe-100 kanye 5.000 $.
Thenga ilayisense 2
ngesamba semali phakathi kwe-100 kanye 30.000 $.
Thenga ilayisense 3
ngesamba semali phakathi kwe-100 kanye 1.000.000 $.
Thenga ilayisense 4
ngemali encane yemali 1.000.000 $.
Thenga ilayisense 5
I-ATG 5 Ukusekelwa Kwezobuchwepheshe
Imibuzo evame ukubuzwa mayelana Autotrade Gold 5.0
Olunye ulwazi olwengeziwe mayelana ne-Bot Bot
Nginemibuzo mayelana AutoTrade Gold, Pantheratrade, i-Pansaka noma i-ATG System
Uma unemibuzo mayelana AutoTrade Gold 5.0, ngikweluleka ukuthi usondele kumxhasi wakho oqondile. Usekelo lobuchwepheshe oluvela PantheraTrade yakhiwe ngabasebenzi abangama-70. Ukuze uxhumane nabo, uzodinga ukuvula ithikithi futhi uchaze isicelo sakho ngokuqondile ngesiNgisi futhi unamathisele okunamathiselwe ukuze usiqonde kangcono. Xhumana nabo kuphela uma kuba nenkinga, ngaphandle kwalokho shayela umxhasi wakho. Ngezinkinga zelayisensi, xhumana nosekelo lwe-Pansaka, ngezinkinga zokuxhuma irobhothi lakho, khetha isayithi Uhlelo lwe-ATG.
Vula ithikithi losekelo lobuchwepheshe RDV kuTelegram ukulandela izindaba
Ezinye izinkathazo nge Autotrade Gold I-5.0?
Ukusekelwa kobuchwepheshe kusuka Panthera uyasicela, njengomxhasi, ukukusiza ezinkingeni ongahlangabezana nazo kepha kubalulekile ukuthi wenze isicelo uqobo ngokuvula ithikithi: https://panthera.support
Isinyathelo 1 / PantheraTrade
Izinyathelo okufanele uzilandele ukuze ubhalise erobhothini Autotrade Gold 5
Ngincoma ukusetshenziswa kwe-a Ikheli le-Yahoo noma le-Gmail uma ubhalisa. Abanye babe nezinkinga zokuqinisekisa nge-imeyili ngamakheli e-Hotmail, Live, Wanadoo, Laposte...
Bhalisa ku AutoTrade Gold 5.0
Gcwalisa izinkambu ezidingekayo ezingu-5:
Ukudluliselwa: ukuhweba ngokuzenzakalelayo-gold
1 - Dala igama lakho lomsebenzisi
2 - Bhala igama lakho nesibongo sakho
3 - Khetha izwe ohlala kulo
4 - Faka inombolo yakho yeselula
5 - Faka i-imeyili yakho (okungcono i-Gmail)
Yamukela Imigomo Yesevisi, bese uyahambisa
📨 I-Autotrade isanda kukuthumelela iphasiwedi yakho nge-imeyili. Ingashintshwa ngokuhamba kwesikhathi. Uma ungakayitholi phakathi nemizuzu engu-5, ungacela ukukhohlwa iphasiwedi evela ekhasini lokungena.
✅ Uma ungenayo i-akhawunti ye-cryptocurrency, ngiyakweluleka, khona manje, ukudala i-akhawunti ku- Binance, Coinbase, Kraken... Gwema ukuhwebelana okuvimbela ukuhoxa kwakho isikhathi esingaphezu kwamahora angu-2 njenge-Crypto.com, isibonelo. Ungathenga i-crypto Binance ngekhadi lakho lesikweletu. Nokho, uzovaleleka emkhawulweni wokuhoxa okhawulelwe yibhange lakho. Ukuze wenze imali ebhange futhi ngaleyo ndlela ufake izizumbulu zemali, ungasebenzisa isevisi ye-SEPA kokuthi Binance.
Bhalisa ku Binance okokufundisa Binance
Uma inombolo yakho yocingo isivele ibhalisiwe, ungayibuyisela emuva bese ufaka u-06 esikhundleni sika-336, uma uhlala eFrance. Sebenzisa uphawu lwekholi njengethuba lesibili.
Isiteji 2 / iPansaka
Bhalisa ku Pansaka ukuze uthole ilayisensi yakho ye-ATG 5
I-Pansaka yinkampani ephethe wonke amalayisensi emikhiqizo yokuhweba ye-Autotrade. Ungakhohlwa ukuthi kufanele ube nakhoUSDT noma i-Litecoin LTC ekuhwebeni kwakho ukuze uthenge ilayisense yakho.
Inombolo Ebhaliwe: 10110618
Igama lokuqala + Isibongo
Ikhadi likamazisi elisesikhathini noma inombolo yepasipoti
Isiqinisekiso sephasiwedi +
Gcwalisa ifomu le-Akhawunti ye-Crypto:
Ikheli le-Crypto: Bonisa ikheli lakho lediphozithi USDT
(Inethiwekhi ye-Ethereum ERC 20) kuphela
Isiteji 3 / iPansaka
Ungayithenga kanjani noma uyithuthukise kanjani ilayisense yakho AutoGold I-5.0?
Ekhasini eliyisiqalo lenkampani yePansaka, chofoza kuthebhu Uhlelo Olukhethekile> Thenga Iphakheji Yesikhathi Esizayo bese ukhetha ilayisense ngokuya ngenani lokuhweba ofuna ukulifaka.
💡 Ngikweluleka ukuthi uqale ngelayisensi 1 kanye nediphozithi engu-$ 110 ukuze uhlaziye ukuhweba kwerobhothi kanye nekhono layo lokukhiqiza imali engenayo. Ungabese uthuthukisa amalayisensi akho ngokukhokha kuphela umehluko phakathi kwalelo nalelo layisensi. Ngakho qala ngokuthenga i-Litecoin (LTC) ku Binance ngenani le- 250 € ngekhadi lesikweletu.
Ukuze ukhokhele ilayisense yakho bese ufaka imali yakho ku- broker, sincoma ukuthenga nokukhokha nge-Litecoin (LTC) ukuze kube lula, isivinini kanye nezinkokhelo eziphansi zokuthengiselana.
Kuthatha ihora ukuze ilayisense yakho isebenze usebenzisa i-CoinPayment.
Isiteji 4 / iPansaka
Ukuhlola nokukhokhela ilayisense yakho
Kulesi sibonelo, ngikhethe ilayisense 2 yerobhothi ye-ATG e broker I-LegoMarket.
Inkinobho 1: Chofoza le nkinobho ukuze ukhethe inkokhelo nge-cryptocurrency. I-popup izovuleka, chofoza inkinobho ye-Crypto bese uqinisekisa.
Inkinobho 2: Qinisekisa futhi Ufinyelele ama-invoyisi
Isiteji 5 / iPansaka
Ukukhokhisa ilayisense yakho
Isifinyezo senani nezindleko ngamadola.
Bese uchofoza inkinobho ye-Coinpayment.
Isinyathelo 6 / Ukukhokhelwa kwemali
Ukukhokhwa kwelayisense yakho Autotrade Gold kuLitecoin (LTC), neCoinPayment.
Gcwalisa imininingwane yakho yokukhokha kwesokunxele, okungukuthi igama lakho, isibongo kanye nekheli le-imeyili (hlola ukuthi alikho iphutha ekhelini lakho le-imeyili). Ngakwesokudla, khetha i-cryptocurrency Litecoin (LTC) ngezindleko zayo eziphansi zokuthengiselana.
Ekugcineni, chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka ngakwesobunxele, ngaphansi kwe-imeyili, ukuqinisekisa ifomu. Asikho nhlobo isidingo sokubhalisa ne-CoinPayment ukuze uqedele ukuthengiselana.
Ikhasi elisha le-CoinPayment lizovuleka futhi likubonise inani kanye neIkheli le-LTC lapho uzodinga ukudlulisela khona i-Litecoin (LTC) yakho esele ithengiwe kushintshiselwano lwakho (Binance, Coinbase, njll.).
On Binance, nasi isixhumanisi se thenga i-Litecoin ekhadini lasebhange.
Isinyathelo 7 / Ukukhokhelwa kwemali
Ukuqedela ukukhokhelwa kwelayisense yakho Autotrade Gold.
Iya ekushintsheni kwakho njenge Binance, yenza ukuhoxa ngqo kuIkheli le-LTC liceliwe. Khumbula ukwengeza i-0,001 LTC enanini eliceliwe ngaphandle kwalokho okwenziwayo kuzonqatshwa futhi uzobuyiselwa imali nge-CoinPaiement. Imali izosetshenziswa yi-Coinpayment ngokubuyisela.
Khombisa ikheli le-LTC lomamukeli. Leli ikheli (umucu) elidluliselwe ku-Coinpayment.
Ukudluliswa kufanele kwenziwe kusetshenziswa inethiwekhi LTC.
Khombisa inani le-LTC ngokungeza 0,001 ngentengo yokugcina
Bese uqinisekisa ifomu.
Uzothola i-imeyili yokuqinisekisa ngo- Binance kanye ne-CoinPayment ekutshela ukuthi ukudluliselwa kube yimpumelelo. Uma wenze iphutha, ungathuki! Uzothola i-imeyili ezobuyiselwa lemali emizuzwini embalwa nge-CoinPaiment uma kuqhathaniswa nezimali zokwenziwe. Hlola ugaxekile wakho. Kufanele usho eyakho Ikheli lediphozi le-LTC.
Isinyathelo 8 / Pantheratrade
Ukuvulwa kwe-a I-akhawunti ye-MT4 ukuhweba at Pantheratrade.
Ukuze usebenzise amarobhothi ahlukahlukene okuhweba anikezwa yinkampani PantheraTrade, udinga ukuvula i i-akhawunti ejwayelekile ye-MT4. Lokhu kuzohlanganisa yonke imikhiqizo eyenziwe yatholakala kuwena.
Ukuze wenze lokhu, chofoza isixhumanisi Ama-Akhawunti Avamile > I-akhawunti ye-MT4. Bese uchofoza inkinobho Dala i-Akhawunti ye-MT4
Isinyathelo 9 / Pantheratrade
Shintsha ifayela lakho le- Iphasiwedi yesikhashana itholwe nge-imeyili.
Usanda kuthola igama lakho lomsebenzisi nephasiwedi yesikhashana nge-imeyili. Igama lakho lomsebenzisi liwukungena kwakho Ngemvume.
Manje sizoshintsha iphasiwedi yakho yesikhashana.
Ukuze wenze lokhu, chofoza isixhumanisi ngezansi kwesokunxele kwesikrini: Setha kabusha Iphasiwedi Yokungena. Faka iphasiwedi yakho yesikhashana oyithole nge-imeyili endaweni yokuqala, bese ufaka iphasiwedi entsha yokungena kulezi zindawo ezimbili ezingezansi.
Isinyathelo 10 / Pantheratrade
Dala i-akhawunti yakho Autotrade Gold.
Okokuqala, chofoza isixhumanisi I-CopyTrade Accounts > I-Akhawunti ye-MT4. Chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka phezulu kwesokudla: Dala i-akhawunti entsha
Khetha I-AutoTradeGold kokuthi Khetha Isigaba, bese uchofoza inkinobho Dala i-Akhawunti ye-MT4.
Ithebula kufanele livele ekhasini elisha. Gcina i-akhawunti yakho yokungena ye-MT4 kanye nephasiwedi yakho yoMtshali weMT4 iphephile. Azophinda athunyelwe kuwe nge-imeyili. Lawa makhodi azokuvumela ukuthi ulandele ukuhweba kanye ne-akhawunti yakho yansuku zonke.
Isinyathelo 11 / Pantheratrade
hlinzeka ngeyakho KYC ukuze uqinisekise i-akhawunti yakho.
Ukuze uqinisekise i-akhawunti yakho, kufanele unikeze enye yezingxenye ezintathu zobunikazi eziceliwe (umazisi kazwelonke, ipasipoti noma ilayisense yokushayela). Qaphela, umazisi wakho akumele uphelelwe yisikhathi ngaphandle kwalokho i-KYC yakho izonqatshwa ngokuzenzakalelayo.
Khetha uhlobo lwe-ID oyifunayo bese uthatha isithombe nge-smartphone yakho.
Faka inombolo ye-ID oyifunayo ensimini: Faka inombolo ye-ID.
Layisha isithombe sakho (isandiso esivumelekile: jpg, jpeg noma png). Ungeqi isisindo esingu-1 Mo. Ukuze ulungiselele isithombe sakho ngaphambi kokusithumela, sebenzisa isayithi tinypng.com.
Ekhasini Update KYC, kufanele ubone isimo sakho kumodi ethi "Kulindile". Nikeza iqembu isikhathi Pantheratrade ukuze uqinisekise umazisi wakho.
Isinyathelo 12 / Pantheratrade
Khokha i- Isaphulelo ukuze uqinisekise ikheli lakho lediphozithi.
Ivawusha Yephrofayili iwukubhaliswa kwekheli lakho lediphozithi ukuze uthole okuwinile irobhothi. Leli kheli kungaba BTC, ETH noma USDT erc20/trc20. Sincoma iUSDT trc20 (trx) ngezindleko zayo eziphansi zokusebenza nokuzinza.
Chofoza kusixhumanisi Amavawusha ephrofayili bese inkinobho Thenga Ivawusha Entsha
Khetha i-crypto: ETH, BTC, USDT TRC20 noma USDT I-ERC20, bese uqinisekisa
Phansi kwekhasi, chofoza inkinobho ye-Checkout Manuwali, uzoqondiswa kabusha ku-Coinpayments ukuze wenze inkokhelo
Isinyathelo 13 / Pantheratrade
Ukubuyekeza Update Profile.
Ivawusha Yephrofayili iyakhokhelwa futhi nekhodi yevawusha yakho ivela kuthebula, kukholomu Isaphulelo. I-KYC yakho iyavunyelwa. Manje sizoqedela ukugcwalisa Iphrofayili.
Okokuqala, faka ikheli lakho USDT trc20 kanye/noma i-erc20 bese iqinisekisa.
Uzothola ikhodi ye-OTP nge-imeyili. Le khodi kufanele ifakwe endaweni yokuqala.
Emkhakheni wesibili, faka ikhodi yevawusha ozoyithola ekhasini Ivawusha Yephrofayili, ikholomu yevawusha. Bese uqinisekise.
Isinyathelo 14 / PantheraTrade
Ungayifaka kanjani imali yakho yokuhweba ku- PantheraTrade ? (1/3)
Kucatshangwa ukuthi ilayisensi isemgudwini wokukhokhwa.
Sibuyela kusayithi PantheraTrade ukuze ubeke imali yokuhweba nge broker I-Lego Market LCC.
Chofoza COPYTRADE ACCOUNTS > MT4 Deposit
Bese uchofoza inkinobho MT4 Idiphozithi Entsha
Imvamisa lokhu kuyidiphozi yakho yokuqala PantheraTrade, kepha uma kamuva ufisa ukukhulisa imali yakho, kuzofanele ubuyele kulesi sinyathelo. Khumbula ukuthi inani lediphozithi libuye lincike ekukhetheni kwelayisense lakho.
Inani le-US $: khombisa inani ofisa ukulifaka kuma-dollar
Khetha i-Akhawunti: inombolo ye-akhawunti yakho ye-ATG Gold
Maka ibhokisi elizinikele kwimigomo yokusetshenziswa, bese uthumela leli fomu
Isiteji ? / PantheraTrade
Faka imali yakho nge Imali Yezimali. (2/3)
Gcwalisa imininingwane yakho yokukhokha, okuyigama lakho lokuqala, isibongo nekheli le-imeyili.
Ekugcineni, chofoza inkinobho eluhlaza okwesibhakabhaka ngakwesobunxele.
Ikhasi elisha lizovulwa kokuthi CoinPayment likunikeze inani kanye nekheli lapho kufanele ufake khona i-Litecoins LTC yakho.
Note Sicela wazi, leli kuzoba ikheli elisha lediphozi. Ngeke kube ikheli lediphozi elifanayo nelayisensi yakho.
Faka imali yakho yokuhweba nge PantheraTrade. (3/3)
Ukukhwabanisa okufanayo nokuthenga ilayisense. Nge Binance, yenza inkokhelo eqondile ngokwengeza u-0.001 enanini eliceliwe le-LTC: https://www.binance.com/fr/.../crypto/LTC.
Faka ikheli le-LTC lomamukeli, lelo elishiwo ku-Coinpayment.
Khombisa inani le-LTC, bese ufaka 0,001 ngentengo yokugcina.
Wait️ Linda amashumi ambalwa emizuzu. Uzothola i-imeyili yokuqinisekisa ngo- Binance kanye neCoinPayment ukukwazisa ukuthi ukudluliswa kwenziwe ngendlela efanele.
Inqobo nje ukuxhaswa kwezobuchwepheshe kwe-Auto Trade Gold akuqinisekisanga okwenziwe, ngeke ubone inani lakho kuhlelo lwakho lokusebenza lwe-MT4.
Isinyathelo 13 / Pansaka / ATG-System
Hlanganisa i-ATG System nePansaka
Xhuma Kusistimu ye-ATG
Ukuze uxhume ku-https://atgbot.co, sebenzisa i-imeyili efanayo nephasiwedi njengokuvula Pantheratrade.
Linda imizuzu eminingana ukuze ilayisense yakho ibhekelwe uhlelo. Le nqubo isebenza ekuthengeni ilayisense lakho lokuqala kanye nasekuthuthukisweni kwamalayisense wakho alandelayo. ICala ikuvumela ukuthi uhlobanise ilayisensi entsha ne-akhawunti yakho yokuhweba.
uzokwenza kanjalo thola i-imeyili kusuka ku-atgbot.co (futhi hlola ugaxekile wakho).
Buyisa Ikhodi yevawusha kanye ne-ID yevawusha ekhona ku-imeyili.
Iya kuwebhusayithi ye-ATG System usebenzisa amakhodi akho Pantheratrade futhi wenze ilayisense yakho isebenze: https://atgbot.co/user/ea/activate
Kopisha unamathisele izakhi ezinkambu eziceliwe.
Khombisa kahle: Ngine-Akhawunti Yokuhweba
Khetha ifayela lakho le- compte Gold
Bese uqinisekisa leli fomu.
⚠️ Qiniseka ukuthi ilayisense yakho "Ixhunyiwe". Chofoza inkinobho ethi "Vuselela" uma kunesidingo kuze kube yilesi simo. Zama amahora ambalwa kamuva uma inethiwekhi igcwele, kungenjalo vula a Ithikithi losekelo lwe-ATG System ukuze bavule irobhothi lakho le-ATG 5.
Isinyathelo 14 / MetaTrader 4
Ungayilandela kanjani imiholo yakho kuhlelo lokusebenza MetaTrader 4 ?
I-MT4 iyisicelo seselula samahhala esikuvumela ukuthi ulandele ukuvela kwemali oyitholayo. Kungakhathaliseki ukuthi uku-Android noma i-IOS, uzoyithola kalula Ezitolo. Bheka kahle ilogo, udinga inguqulo yesi-4 ye-MetaTrader.
Uma isifakiwe, sizoyilungiselela ku-akhawunti yakho yokuhweba. Ukuze wenze lokhu, kufanele ukuthi uthole i-imeyili evela PantheraTrade nge 4 idatha ezibalulekile.
Iphasiwedi eyinhloko: Lokho kwelayisense yakho
Iphasiwedi yabatshalizimali (funda kuphela): XXXXXX
Kuhlelo lokusebenza lwe-MT4, chofoza ku-Izilungiselelo (isithonjana esingezansi kwesokudla) > I-akhawunti entsha > Ngena ngemvume nge-akhawunti ekhona.
Ebhokisini lokusesha (phezulu), bhala: LegoMarketLCC2-LIVE
Igama lomsebenzisi: Ngena ngemvume (izinombolo). Ungakwazi futhi ukuzithola ekhasini eliyisiqalo le Pantheratrade (i-akhawunti ye-MT4).
Iphasiwedi: Iphasiwedi Yomtshalizimali (funda kuphela). Uma ikulahlekele, zama iphasiwedi oyisebenzise kuyo Pantheratrade.
Isinyathelo 15 / PantheraTrade
Ungayikhipha kanjani imali oyiholile kanye / noma nenhlokodolobha yakho nganoma yisiphi isikhathi ?
Ungakwazi ukuhoxisa kuphela ku-crypto okukhulunywe ngayo esinyathelweni sesi-2. Uma ubonise noma yikuphi USDT kwikheli le-Crypto, uzothola USDT. Sicela uqaphele ukuthi ukuhoxiswa kwemali okungenani kungu-$50 kanye nesilinganiso esiphezulu esingu-$2000 ngosuku kuma-akhawunti angaphansi kuka-$100.000. Ngaphandle kwama- $ 100.000 afakiwe (futhi angatholwa), ungakhipha i-10% yemali ngosuku. Bala 15 kuya ku-35 ​​$ amanani okwenziwayo (ngaphandle kwenani olifunayo), kuye ngemali ekhethiwe.
Yenza ukuhoxa kusuka ku- PantheraTrade
Ukuze wenze ukuhoxa, buyela kusayithi PantheraTradechofoza Okwenziwayo> Ukuhoxa.
Khetha imali oyifakile enkambeni yekheli le-crypto lapho ubhalisa (USDT / LTC noma okunye), bese uqinisekisa.
Isithombe 1 - Gcwalisa imininingwane eceliwe:
Imithombo: Khetha i-akhawunti yakho ye-MT4 noma i-akhawunti yakho yezaphulelo. Ungaphinda uthole ku-Wallet yakho yangaphakathi (amakhomishana amaholo kulabo abaxhasayo).
Inani le-US $: inani ofisa ukulikhipha ngamadola
Yamukela imibandela bese Uqinisekisa. Uzoqondiswa kabusha ekhasini elisha futhi ngesikhathi esifanayo uzothola i-imeyili ehlanganisa nekhodi ye-OTP
Isithombe 2 - Hlola futhi wamukele ukuhoxiswa:
Phansi kwaleli khasi, phinda ufake iphasiwedi yakho PantheraTrade noma 2FA ngaphandle kokukhohlwa manje ukwengeza ikhodi (i-imeyili OTP). Uma ungakayitholi, ingase ivele ku-imeyili yakho (hotmail, yahoo...). Ukubhalisa nge-Gmail akuyona inkinga. Uma kunesidingo, vula ithikithi bese ubacela ukuthi bashintshe ikheli lakho lamanje libe yikheli le-gmail.
Bese uqinisekisa okwenziwayo.
Kuzodingeka ulinde isilinganiso samahora angu-24 (ngaphandle kwezimpelasonto) ukuze imali yokukhipha imali ifakwe ku-Exchange yakho. Lokhu kuncike emehlukweni wesikhathi phakathi kwe-Indonesia nezwe ohlala kulo.
Ungaxhumana kanjani nosekelo lobuchwepheshe Autotrade Gold ?
Ukuxhumana noyedwa wabantu abayi-70 abeseka usizo lobuchwepheshe luka Pantheratrade, qhubeka ngokulandelayo: njalo uhumushe umlayezo wakho uye esiNgisini noma e-Indonesia (ukuhumusha nge-Google umngane wakho), khuluma ngokuqondile futhi unembile, nikeza ubufakazi bokwenziwe (txid), yiba nomusa futhi ube nomusa. Xhumana nosekelo uma kunenkinga, hhayi ukubuza imibuzo. Abaxhasi, izinkundla zokuxhumana kanye nezinkundla banalo mgomo. Ungathumeli imilayezo eminingana, akusizi futhi ayivumeli izinkinga ukuba zixazululwe ngokushesha, ngokuphambene nalokho.
Vula ithikithi lokusekela PantheraTrade
Isihloko: Amagama ama-4 noma ama-5 okuchaza inkinga yakho
Khetha uMnyango: Ukuxhaswa Kwe-Akhawunti / Ezezimali / Inethiwekhi
Khetha Isigaba: Ukukhethwa kuncike enkambini engenhla.
Umlayezo: Chaza inkinga yakho ngesiNgisi noma ngesi-Indonesian
I-Image Link: Ikuvumela ukuthi ungeze isithombe esichazayo
Thumela umlayezo wakho.
Impendulo izobe seyithunyelwa kuwe kungakapheli amahora angama-24 (ngaphandle kwezimpelasonto). Iba nesineke.
Ungathanda umxhasi irobhothi le-ATG kusuka PantheraTrade ?
Uma nawe ufuna ukudlulisela abangani futhi ubanike inzuzo yanyanga zonke elinganiselwa ku-15%, uzodinga ukubanikeza isixhumanisi sakho sokudlulisela esitholakala ekhasini. Ubambiswano> Ideshibhodi
I-URL ezothunyelwa kokudlulisile izobukeka kanjena: https: //pantheratradebukhoma / irejista /? r = IB ...
Indima ye- godfather weqiniso ukuqondisa nokweluleka ngamunye wabazukulu bakhe besikhathi esizayo, kusukela ekubhaliseni kuya ekutholeni imali etholwayo, kusuka ekukhokhweni kwasebhange kuya kwi-cryptocurrency, echaza izingozi, ukuthatha isikhathi ekusekelweni kwezobuchwepheshe ... ube semkhandlwini nase umusa.
Amakhomishini oxhaso Autotrade Gold
Amathiphu okungena ngemvume kubasebenzisi abadala be Pantheratrade
Kubatshalizimali ababhalise ku Pantheratrade ngaphambi kukaMashi 18, 2022 futhi ofisa ukuxhuma enguqulweni entsha ye Pantheratrade.
Iya ekhasini: https://live.pantheratrade.tech
Faka ikheli le-imeyili lokungena le-akhawunti yakho endala PantheraTrade bese uchofoza inkinobho yokuqinisekisa.
Uzothola nge-imeyili igama lakho lomsebenzisi kanye nephasiwedi yakho yesikhashana okuzodingeka ukuthi ihlanganiswe kuleli khasi: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
⚠️ Uma ungazange uthole le imeyili, landela lezi zinyathelo:
Iya ekhasini: https://live.pantheratrade.tech/AccountLogin.aspx
Chofoza okuthi Ukhohlwe Iphasiwedi
Igama lomsebenzisi elikhohliwe nephasiwedi ku-Pansaka
Okwabantu ababhalisile ku- AutoTrade Gold ngaphambi kukaSepthemba 1, 2021, kungenzeka ukuthi awuzange uyithole imininingwane yakho yokungena ngePansaka nge-imeyili. Nasi isixazululo sokubamukela:
Ukuxhuma ku-backoffice: https://pansaka.co.id/panel/login.php
Chofoza kusixhumanisi: Ukhohlwe iphasiwedi yakho?
Uzofika kwelinye ikhasi.
Chofoza kusixhumanisi: Ukhohlwe i-ID yomsebenzisi?, bese ufaka ikheli lakho le-imeyili.
Uzothola i-imeyili yokuqala ene-ID yakho yokungena ngemvume. Lokhu ukulandelana kwezinombolo.
Buyela emuva ekhasini lokungena le-Pansaka: https://pansaka.co.id/panel/login.php, bese uchofoza futhi kusixhumanisi: Ukhohlwe iphasiwedi yakho? ngokukhomba okokuhlonza uxhumano (izinombolo).
Uzokwazi ukufaka igama lakho lomsebenzisi ne-password yakho entsha ukuxhuma ku-Pansaka.
Gxila ku-CEO ye-Autotrade, uMnu. Dinar Wahyu Saptian Dyfrig
Dinar Wahyu Kenzo ungumuntu odumile emphakathini e-Indonesia. Njengomtshali-zimali owaziwayo, waba nesibopho se-IT kanye nesigaba sobuchwepheshe obusha egameni lenhlangano ye-ARTI. (Inhlangano yeRobhothi Yokuhweba yase-Indonesia) ukuqapha izakhiwo zokuhweba ezingekho emthethweni e-Indonesia kanye nenhlangano i-APLI elawula ukumaketha kwenethiwekhi kusukela ngo-1984. Indoda enenhliziyo enkulu, ngenxa yenzuzo yenkampani, amaphasela okudla angaphezu kuka-10 asatshalaliswa kubantu base-Indonesia ababedinga ngesikhathi se-Covid. Uphinde abe ngumphathi wenkampani i-RBG limited yase-England, maphakathi ne-Forex, futhi uxhasa iqembu lebhola lase-Indonesia, elilingana neligi 000 yaseFrance.
U-Dinar Wahyu Saptian Dyfrig (ophakathi) oyi-CEO ye-Autotrade / Pansaka kanye no-Bambang Soesatyo, usomlomo wephalamende lase-Indonesia.